प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला फेर्ने डाक्टर भन्छन्ः... :: सन्जिब बगाले :: Setopati
प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला फेर्ने डाक्टर भन्छन्ः प्रेसर थियो, राति तीन बजेपछि निद्रै परेन (भिडिओ)
सन्जिब बगाले काठमाडाैं, फागुन २१
'हिजो (मंगलबार) साँझ मलाई प्रधानमन्त्रीले राति चाँडै सुत्नुस् है भन्नुभएको थियो। तर सुत्दा ११ बज्यो। तीन बजे बिउँझिएँ। निद्रा लागोस् पनि कसरी,' त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मिर्गौला प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सक प्राध्यापक प्रेमराज ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग भनेका थिए।
डा. ज्ञवालीका भनाइबाट थाहा हुन्छ, उनी कति दवाबमा थिए।
'उहाँ अहिले नर्मल नै हुनुहुन्छ, होसमा आइसक्नुभएको छ। प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलाले राम्रो काम गरेको छ,' सेतोपाटीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा ज्ञवालीले भने, 'कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले प्रत्यारोपणपछि राखिने वार्डमा राखेका छौं। त्यहाँ बसुञ्जेल हामी कसैलाई भेट्न दिँदैनौं।'
प्रधानमन्त्री ओली कुराकानी गर्न सक्ने भए पनि संक्रमणको डर भएकाले आराम गर्न लगाइएको उनले बताए।
'एकदम अप्ठ्यारो केही पनि छैन अहिले,' उनले भने, 'अब उहाँको मिर्गौलाले कति पिसाब बनाउँछ, त्योअनुसार उहाँलाई सलाइन चढाउन पर्ने हुनसक्छ।'
बिहीबारबाट उनलाई खान दिने चिकित्सकहरूको तयारी छ। संक्रमण नहोस् भनेर 'एन्टिबायोटिक' चलाउने र शरीरले मिर्गौला अस्वीकार नगरोस् भनेर औषधि चलाउन पर्ने पनि ज्ञवालीले बताए।
प्रधानमन्त्रीलाई शल्यक्रिया वार्ड लैजानुअघि डा. ज्ञवालीले 'तपाईंलाई केही भन्नुछ' भनेर सोधेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले 'तपाईंहरू प्रति विश्वास छ' भनेका थिए। शल्यक्रियापछि भने प्रधानमन्त्रीलाई 'डिस्टर्ब' नगरेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने टोली
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई मिर्गौला दिने समिक्षा संग्रौलाको पनि स्वास्थ्य सामान्य छ। उनको शल्यक्रिया 'ल्यापरोस्कोपिक' विधिअन्तर्गत गरिएको हो। यो भनेको शरीर नचिरी सानो प्वाल मात्र बनाएर दुरबिनजडित उपकरण भित्र पठाएर गरिने शल्यक्रिया हो।
समिक्षाको शरीरमा त्यही सानो घाउ मात्र भएको र अहिले होसमा आएर कुराकानी गर्न थालेकी डा. ज्ञवालीले बताए।
'मैले उहाँलाई भेटेको थिएँ। शल्यक्रिया गरेको घाउ अलि-अलि दुख्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अरू सामान्य छ,' उनले भने।
कुनै पनि नकारात्मक अवस्था नभएमा चार-पाँच दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई 'डिस्चार्ज' गर्ने चिकित्सकको योजना छ। समिक्षा भने तीन दिनमा डिस्चार्ज हुनेछिन्।
सरकार प्रमुखको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा कत्तिको दवाब भयो भन्ने जिज्ञासामा ज्ञवालीले भने, 'अरू त केही थिएन, प्रेसर चाहिँ धेरै थियो। सरकार प्रमुख भएकाले उहालाँई हामीले जसरी पनि राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने भयो। तर प्राविधिक रूपमा त उपचार क्रम र विधिमा सर्वसाधारण र उहाँमा केही फरक हुँदैन।'
सरकार प्रमुखको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सकेकाले आफूहरू निकै खुसी रहेको समेत उनले बताए।
'एकदम खुसी छौं। हामी पहिलो मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा जति खुसी थियौं, त्योभन्दा बढी खुसी छौं,' डा. ज्ञवालीले भने, 'सरकार प्रमुखले हामी, हाम्रो टोली र अस्पतालप्रति विश्वास गर्नुभयो। यसलाई जनताले पनि सकारात्मक लिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौं।'
प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल रहुञ्जेल कसैलाई भेटघाट गर्न नदिने उनले बताए।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २१, २०७६, ११:१३:००